အကြောင်းအရာမေးရန်နှင့်ဖြေရန်မေးခွန်းများ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 2, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
AboutUs မှဤအချက်အလက်သည်အကြောင်းအရာစျေးကွက်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မေးမြန်းရန်လိုအပ်သည့်ခိုင်မာသောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဒီပို့စ်တွင်ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းများကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြေဆိုပါလိမ့်မည် -
အဘယ်သူသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်များသည်အသစ်နှင့်အလယ်အလတ်ဖြစ်သောအကြောင်းအရာစျေးကွက်များဖြစ်သည်။
ဘာ - သင်၏အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဖြေသင့်သောအခြေခံမေးခွန်းများတွင်ဤအချက်အလက်ကိုဖော်ပြခြင်း။
ဘယ်မှာ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုဤနေရာတွင်ထုတ်ဝေပြီး၎င်းအပါအဝင်လူမှုရေးလမ်းကြောင်းအားလုံးတွင်မျှဝေမည် Pinterest နှင့် StumbleUpon.
ဘယ်တော့လဲ - တစ်နိုင်ငံလုံးရှိစာဖတ်သူအမြောက်အများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်နံနက်လယ်၌ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေလိုသည်။
အဘယ်ကြောင့် - ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုဝေမျှခြင်းကြောင့်လူသိများပြီး၎င်းတို့အတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဘယ်လိုလဲ - AboutUs မှသတင်းအချက်အလက်များကိုဝေမျှခြင်းသည် content marketer အား၎င်းတို့၏မဟာဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖွဲ့စည်းပုံကိုပေးသည်။ ငါကိုရွှေ့ချင်တယ် ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုအဆင့် ၇ ဆင့် တစ်ခုလုံးကိုအစီအစဉ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လာမယ့်!
Tags: ကိုယ်တို့အကြောင်းဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာအကြောင်းအရာ infographicအကြောင်းအရာစျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘာအခါ,ဘယ်မှာအဘယ်သူသည်အဘယ်ကြောင့်
အကြောင်းအရာကောင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာအတွက်အဆင့် ၇ ဆင့်
Poken: Corporate Events မှာကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကိုမြှင့်တင်ပါ
1:2014 pm တွင်စက်တင်ဘာ 3, 02 မှာ
ငါနီးပါးငြင်းခုန်လိမ့်မယ် (တကယ်ပန်းခြံထဲကဒီတစ်ခုထိမှန်ရန်) တစ်စုံတစ် ဦး က 1-1 တကယ်နိမ့်ဆင်းရရန်ပြောဆိုရန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု။ မြေကြီးပေါ်မှအောင်မြင်သောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကိုတည်ထောင်ထားသော Matthew Bucher နှင့်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအားဤသို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်